यस्तो छ जापान प्रवेश प्रक्रिया र क्वारिन्टिन नियम | Nepali In Japan
यस्तो छ जापान प्रवेश प्रक्रिया र क्वारिन्टिन नियम
कोभिड-१९ अर्धआपतकालिन नियमहरु हटेसँगै जापानले प्रवेश प्रतिबन्धका नियमहरुपनि खुकुलो बनाएको छ । जापानको सीमा प्रतिबन्धहरू परिवर्तन हुने क्रममा प्रवेश क्वारिन्टिन नियम थप खुकुलो बनाइएको छ ।
तपाईँलाई नवीनतम नियम परिवर्तनहरूबारे जानकारी दिनको लागि, हामीले जापानको हालको सीमा प्रतिबन्धहरू सम्बन्धी मार्च २१ तारिखसम्म परिवर्तित सामान्य अध्यागमन नियम र प्रश्नहरूको जवाफ समेटेका छौं । यसमा केही नियमहरु मार्च १ तारिखबाट नै लागू भइसकेका छन् र केही मार्च २४ तारिखबाट लागू हुँदैछन् ।
को जापान प्रवेश गर्न सक्छन् ?
मार्च १ सम्म, विदेशी बासिन्दाहरू, व्यापार यात्रीहरू र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई जापान प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ । तर सीमानाहरू दुर्भाग्यवश अझै पनि पर्यटकहरूका लागि बन्द छन् । यदि तपाईं जापानको फर्कने आवासिय वासिन्दा हुनुहुन्छ वा व्यापार वा अध्ययन उद्देश्यका लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रवेशमा लगाइएको सबैजसो रोक हटाइएको छ ।
यदि तपाईं छुट्टीमा जापान भ्रमण गर्न पर्खिरहनुभएको छ भने अहिलेको लागि जापान सरकारले पर्यटकलाई नखोलिसकेकाले तपाईं केहीसमयका लागि अझै पर्खनुको विकल्प छैन ।
जापानी नागरिकहरूका साथसाथै दीर्घकालीन निवासको अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकहरूका पति पत्नी र बच्चाहरूलाई (असाधारण परिस्थितिहरू)को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । जसले उनीहरूलाई हालको यात्रा प्रतिबन्धहरूको पर्वाह नगरी जापानमा पुन प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ।
असाधारण परिस्थितिमा कसले जापान प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने थप जानकारीको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ ।
जापान प्रवेश गर्न के चाहिन्छ ?
हाल, तपाईंले जापान प्रस्थान गर्नु अघि निम्न कागजातहरू तयार गर्न आवश्यक छ :
प्रस्थान गरेको ७२ घन्टा भित्र प्राप्त भएको कोभिड १९ परीक्षण प्रमाणपत्र
लिखित प्रतिज्ञाको हस्ताक्षरित प्रतिलिपि ९अंग्रेजी र जापानीमा उपलब्ध
स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय द्वारा डिजिटल रूपमा प्रशासित एक पूरा प्रश्नावली (बहु भाषाहरूमा उपलब्ध)
एक पटक तपाईं जापानमा बसिक्नुभएको र फर्कंदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले निम्न काम गर्नुपर्दछ…
-माथिका कागजातहरू पेश गर्नुहोस्
-पीसीआर परीक्षण गर्नुहोस्
-आवश्यक स्वास्थ्य निगरानी एप डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रवेश आवश्यकताहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि, स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस् ।
कति जना जापान प्रवेश गर्न सक्छन् ?
हाल प्रतिदिन ७,००० मानिसको आगमनको सीमा छ, तर सरकारले छिट्टै दैनिक १०,००० व्यक्तिको दैनिक सीमा बढाउने बताएको छ । हालको लागि अप्रिल १ तारिखबाट दैनिक १० हजार बिदेशीले प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबारेमा जापान सरकारले आधिकारिक घोषणा भने गरिसकेको छैन ।
आगमनमा कोभिड-१९ को परीक्षण नेगेटिभ आएका यात्रुहरूले पनि सेल्फ आइसोलेसन (परीक्षण गरेको २४ घण्टाभित्र हुनैपर्छ) विमानस्थलबाट आफ्नो गन्तव्यमा सार्वजनिक यातायात लैजान पाउनेछन् । यसअघि अनिवार्य रुपमा निजि सवारीका साधनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको थियो ।
विदेशबाट आउनेहरूको लागि क्वारिन्टिन आवश्यकताहरू के हुन् ?
मार्च १ बाट तीन स्तरीय क्वारिन्टिन प्रणाली लागू गरिएको छ । अब विदेशबाट आएका केही यात्रुहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कम दिन बिताउन अनुमति द्रिइएछ ।
एक व्यक्तिले कति दिन क्वारेन्टाइनमा बिताउन आवश्यक छ भन्ने कुरा तिनीहरू कुन ठाउँबाट उडिरहेका छन् र तिनीहरूको कोभिड १९ खोपको स्थितिबाट निर्धारण गरिन्छ। यहाँ हालको क्वारेन्टाइन प्रोटोकल र सरकारले स्वीकृत खोपहरूको विस्तृत रूपरेखा छ।
सामान्य नियमको रूपमा, यात्रुहरूले सात दिन क्वारिन्टिन बिताउनु पर्छ।
यद्यपि, यदि तपाईं ओमिक्रोन भेरियन्टको महामारी प्रकोप भएको ठाउँको रूपमा जापान सरकारले तोकेको देश वा क्षेत्रबाट उडान गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंले बूस्टर भ्याक्सिन प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले पहिलो तीन दिन बिताउन आवश्यक हुनेछ । एयरपोर्ट क्वारिन्टिन होटेल वा समान सुविधामा हुनेछ ।
यदि तपाईं तोकिएको गन्तव्यबाट आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईंले बुस्टर भ्याक्सिन प्राप्त गर्नुभएको छ भने, तपाईंले आफ्नो सात दिनको क्वारिन्टिन घरमै विताउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले तेस्रो दिनमा भाइरसको लागि परीक्षण गर्ने छनौट गर्नुभयो र नतिजा नेगेटिभ आयो भने, तपाईं थप क्वारिन्टिन बसिराख्नुपर्दैन ।
यसैबीच, सरकारले तोकेका देश र क्षेत्रहरूबाट आएका र बुस्टर भ्याक्सिन नपाएका यात्रुहरूले पनि आफ्नो सात दिनको क्वारिन्टिन घरमा विताउन सक्ने भएका छन् । तेस्रो दिन परीक्षण नेगेटिभ आएमा उनीहरुको क्वारिन्टिन अवधि समाप्त हुन्छ ।
पूर्ण खोप लगाएका यात्रुहरू गैर-निर्धारित स्थानहरूबाट आइपुगेकाहरूको क्वारिन्टिन अवधि पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।
तोकिएका देश र क्षेत्रहरू के हुन् ?
मार्च १७ सम्म, निम्न १४ देश र क्षेत्रहरू तोकिएको सुविधामा तीन दिनको क्वारेन्टाइनको अधीनमा रहेका छन् । जसमा नेपाल पनि रहेको छ । अर्थात् मार्च १७ तारिखबाट नेपालबाट आउने कोभिड बिरुद्धको खोप पुरा गरेका यात्रुले अब तीन दिन मात्र क्वारिन्टिन बसे पुग्छ ।
उदाहरणको लागि नेपाल एयरलाईन्समा नारिता बिमानस्थल अवतरण हुने यात्रुले तीन दिन बिमानस्थल अध्यागमनले तोकेको होटल वा आवासमा क्वारिन्टिन बसेपुग्छ । तेस्रो दिन गरिएको परीक्षण नकारात्मक आएमा सिधै आफ्नो निवासमा सार्वजनिक बस, रेल वा ट्याक्सि चेढेर सामान्य यात्रुसरह यात्रा गर्न पाउँछन् ।
यस्तो तीन दिनको क्वारिन्टिन नियम भएको देशहरु निम्न छन्
थप रूपमा पहिले सरकारी सुविधामा क्वारिन्टिनको अधीनमा रहेका केही देशहरुलाई मार्चको शुरुमा सूचीबाट हटाइएको छ । यसमा कम्बोडिया, मेक्सिको, स्वीडेन र स्विट्जरल्याण्ड समावेश छन्।
जापानका अन्य कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरू के हुन् ?
टोकियो र धेरै अन्य जापानी प्रिफेक्चरहरू मार्च २१ सम्म आपतकालिन अवस्थाको अधीनमा थिए । यस समयमा, पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू र अन्य गैर(आवश्यक प्रतिष्ठानहरू खुल्ने समय सामान्य भन्दा छोटो तोकिएको थियो ।
थप रूपमा, सरकारले मानिसहरूलाई भाइरसको फैलावट रोक्न अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको थियो । तर यो नियम मार्च २२ तारिखबाट हटाइएको छ ।
अर्ध आपतकाल हटेपनि टोकियो सहित केही प्रान्तहरुले अझै पनि सावधानि अपनाउन भन्दै केही अनुरोधात्मक नियमहरु जारी गरेका छन् । जसमा साकुरा फूलको समयमा सामुहिक रुपमा साकुरा पार्टिहरु नगर्न र सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ ।
जापानको मूख्य क्वारिन्टिन उपायहरु
मार्च १९, २०२१ देखि, जापानी नागरिकहरू सहित सबै यात्रुहरूले जापान प्रवेश गर्दा यात्रुहरू बस्ने देश क्षेत्रबाट प्रस्थान गर्नु अघि ७२ घण्टा भित्र गरिएको नेगेटिभ परीक्षण नतिजाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
नेगेटिभ परीक्षण नतिजाको प्रमाणपत्र पेश नगर्नेलाई क्वारिन्टिन ऐन बमोजिम जापान प्रवेश निषेध गरिएको छ । एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बिना एयरलाइन्सको बोर्डिङ अस्वीकार गर्नेछन् ।
नेगेटिभ कोभिड परीक्षण नतिजाको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएका देश वा क्षेत्रमा दूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा जापानको कन्सुलर कार्यालयसँग परामर्श गर्नु भनिएको छ ।
Prevबिजुली खपत कम गर्न टोकियो र अन्य ८ प्रिफेक्चरलाई अनुरोध
Nextजापानमा जग्गाको भाउ बढ्यो